RASMI: Kooxda Napoli oo heshiis cusub ka saxiixatay Dries Mertens saacado yar ka hor Final-ka caawa ee Coppa Italia… (Meeqa sano ayuu qalinka ugu duugay?) – Gool FM
(Naples) 17 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Napoli ee dalka Talyaaniga ayaa heshiis cusub oo ku eg ilaa sanadka 2022-ka ka saxiixatay gooldhaliyaheeda ugu sarreeya ee Dries Mertens.
Dries Mertens ayaa ugu dambeyntii qalinka warqadda dul dhigay waxaana qandaraaska cusub uu kooxda Napoli ku sii hayn doonaa ugu yaraan labo sanadood oo kale.
Gelinkii dambe ee maanta oo Arbaco ahayd ayuu Mertens heshiiskan cusub saxiixay saacado yar ka hor kulanka Kooxdiisa Napoli ay caawa la ciyaari doono Juventus ee Final-ka Coppa Italia.
“Waan ku farraxsanahay inaan waqti dheer wadajir ahaanno, nolol dheer baan kuu rajaynaynaa Dries” ayuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray Madaxweyne Aurelio De Laurentiis.
Wuxuu kordhiyay heshiiskiisa ilaa sanadka 2022-ka, isagoo dooq u haysta in xilli ciyaareed saddexaad uu sii joogi karo garoonka San Paolo, kaddib markii uu diiday inuu u dhaqaaqo Kooxaha Chelsea iyo Inter Milan oo doonayey saxiixiisa.
Inkastoo uu kaliya jirsaday 33-sano, waa taageere run ah oo jecel kooxda Partenopei lagu naynaaso, markii uu shabaqa ka soo taabtay Inter kulankii dhowaa ee Coppa Italia waxa uu noqday gooldhaliyahooda ugu sarreeya.
Tan iyo markii uu kaga soo biiray PSV sanadkii 2013-kii, Mertens wuxuu dhaliyay 122 gool, wuxuuna caawiyay 73 gool 310 kulan uu u saftay Napoli.
RASMI: Taariikhda la ciyaari doono, qaabka kulammada ay noqon doonaan, Magaalada lagu beddelay Istanbul & UEFA oo go'aamisay qaabka loo dhammeystiri doono Champions League